Budata World of Warplanes maka Windows
Budata World of Warplanes
Budata World of Warplanes,
World of Warplanes bụ egwuregwu efu nke egwuregwu ụgbọ elu nịntanetị. Wargaming.Net, nke anyị makwaara site na World of Tanks, onye rụrụ egwuregwu ọgụ MMO a na-egwu nefu.
Isiokwu nke Agha Ụwa nke Abụọ, nke bụ isiokwu nke agha ụgbọ elu kacha ukwuu na akụkọ ntolite ụwa. America, Russia, Germany na Japan ghọrọ mba nime egwuregwu ahụ. Mba ọ bụla nwere osisi teknụzụ (osisi nka). Dabere na ndị a, a na -ewepụta ezigbo ọganiihu. Ọ dị naka gị ka ị na -efe ma na -alụ ọgụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ elu niile na -efe netiti 1930 na 1950. Karịsịa, ị ga -amụta ihe ọgụ mgba pụtara na agha ndị a.
Enwere ụdịdị anọ dị iche iche na egwuregwu ahụ: Standard Battle, Single Battle, Training and Training Team. Agbanyeghị, ọ ga -ekwe omume kewaa ngalaba ndị a nụdị ọgụ na usoro ọzụzụ. Ndị a;
Ọnọdụ agha: Ọ bụ akụkụ agha ebe ndị otu abụọ nwere ụgbọ elu 15 notu notu. Ị na -achọ imeri ụgbọ elu ndị iro bụ ezigbo ndị egwuregwu dị ka gị. Ọgụ a anaghị ewe ihe karịrị nkeji iri na ise. A na -ahọpụta maapụ egwuregwu na ndị egwuregwu na -enweghị usoro. Enwere ike ịkpọ ya Team Deathmatch. Mana dị ka mgbakwunye, ị na -agbalị ibibi ntọala ndị iro gị nala.
Ọnọdụ Ọzụzụ: Ị na -eji akụkụ a emeziwanye onwe gị. Ị nwekwara ike ịzụ gị na ndị otu gị. Ndị iro gị na -aghọ bots (ọgụgụ isi).
Na egwuregwu; Enwere ụdị ụgbọ elu 4: Fighter, Heavy Fighter, Attack Aircraft na Fighter-Based Fighter. Ọ na -aga nekwughị na e nwekwara ọtụtụ ụdị ndị a. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ nhọrọ ịhazi onwe gị na -eche gị, site na bọmbụ ruo ngwa ọgụ, site na mgbọ ruo rọketi, site na injin ruo na agba.
Nime World of Warplanes, ị na -etinye oge gị nụgbọ elu ụgbọ elu gị iche agha. Ebe a;
Ị nwere ike họrọ ụgbọ elu gị wee malite ịlụ ọgụ.
Ị nwere ike ịrụzi ụgbọ elu gị.
Ị nwere ike ịzụta akụkụ, ihe maka ụgbọ elu gị wee bulie ihe gị niile.
Ị nwere ike ijikwa akaụntụ gị.
Ị nwere ike ịgwa ndị egwuregwu ndị ọzọ okwu.
Ị nwere ike ịhụ ọnụ ọgụgụ agha gị yana nkọwa niile.
World of Warplanes Ụdịdị